अमेरिका पुगेर प्रेमीलाई भेटेर नेपाल फर्किएकी नायिका वर्षा शिवाकोटीलाई यत्रो ठूलो लोट्री पर्यो ? आखिर कसले पूरा गरिदियो वर्षाको यो इच्छा ? – Gazabkonews
अमेरिका पुगेर प्रेमीलाई भेटेर नेपाल फर्किएकी नायिका वर्षा शिवाकोटीलाई यत्रो ठूलो लोट्री पर्यो ? आखिर कसले पूरा गरिदियो वर्षाको यो इच्छा ?
काठमाडौं । अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटी स्किन सिटीको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएकी छन् ।सिवाकोटी नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल अन्तर्गत रहेको छाला, कपाल तथा नङसँग सम्बन्धित काम गरिने स्किन सिटीको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएकी हुन् ।